Maurizio Sarri oo ka hadlay suurtagalnimada ah in laga ceyriyo tababarka kooxda Juventus – Gool FM
Halkee marayaa heshiiskii kooxda Liverpool ay ku dooneysay saxiixa Thiago Alcantara??
Barcelona oo ku dhow inay dhameystirto heshiiska xiddig ka tirsan Kooxda Ajax
Dajiye August 6, 2020
(Turino) 06 Agoosto 2020. Macalinka reer Talyaani iyo kooxda Juventus ee Maurizio Sarri ayaa ka jawaab celiyay wararka sheegaya suurtagalnimada ku aadan in shaqada laga ceyriyo, haddii ay dhacdo inuu ka soo gudbi waayo naadiga Lyon.
Juventus ayaa la soo kulantay guuldarro 1-0 ah kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League oo ay booqatay Lyon, waxayna habeen dambe ee Jimcaha ah ku soo dhaweyn doonaan kooxda reer France garoonka Allianz.
Maurizio Sarri ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulankan wuxuu ka hadlay dhowr arrimood ee ku saabsan kooxdiisa iyo mustaqbalkiisa wuxuuna yiri:
“Uma maleynayo inay sidaas dhici doonto, waxaan u maleynayaa in su’aashan lagu eedeynayo maamulka kooxda Juventus, taasoo ah inaysan khibrad u leeyihiin shaqadooda, waxaana u arkaa inay yihiin xirfadlayaal”.
“Waa inay qiimeeyaan xilli ciyaareedka oo dhan, sidaas darteed haddii ay go’aansadaan inay la soo saxiixdaan tababare cusub, kulanka barri kama dhigna inuu wax saameyn ah ku yeelan doono haddii aan badino ama aan guuldarreysano”.
“Waa ciyaar muhiim ah, laakiin ku guuleysiga horyaalka Talyaaniga ayaa sidoo kale muhiim ahaa, dabcan waxaan ognahay muhiimada ay leedahay inaan gaarno magaalada Lisbon oo aan halkaas la joogno kooxaha waa weyn ee yurub wareegyada bug baxda, waa sababtan waxa kulanka ka dhigaya mid muhiim ah ee ma ahan arrin kale”.